3152 shop 3115 review
Monster Cheese (Yangon Domestic Airport T3 Branch )
Booking 1 Coupon Takeout Smart Order
Tam Thai(Thai Food & Som Tum)(ထိုငျးအစားအစာ+သင်ျဘောသီးထောငျး)
PPJ BBQ & Mala Xiang Guo
Kaung Kaung Yunan Restaurant
ယူနန်ထမင်းနှင့်ဟင်းအပြင် မာလာဟင်း၊ ဂဏန်းချက်နှင့် ယခင်ဟင်းလျာများကိုလည်း ရောင်းချပေးသွားပါမည်။ မွေးနေ့ပွဲနှင့် အခြားအော်ဒါပွဲများကိုလည်း အထူးလက်ခံပါသည်။
Maung Kayah Bar
ပင်လယ်စာစုံစုံလင်လင်နှင့် ရှုးရှုးရှဲရှဲစားချင်တဲ့သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး ယိုးဒယား အ‌ထောင်းနဲ့ အသုပ် အမျိုးမျိုးရရှိနိုင်တဲ့ ၂၁ လမ်းထဲက Yim Siam Thai Restaurant. အရမ်းကောင်းတဲ့ ထိုင်းစတိုင် ချဉ်ချဉ်စပ...
Mr. Xiang Guo
We are located in Youth Bazaar at People’s Park. We strive to serve the best mala in town.
YPPN- Yum Zab & Roast Chicken
Yay Sat Sone Yar Restaurant